Gudoomiyihii barlamaanka Butlaan oo lagu soo dhaweeyay Sanaag: SAWIRO - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Gudoomiyihii barlamaanka Butlaan oo lagu soo dhaweeyay Sanaag: SAWIRO
Gudoomiyihii horjoogaha Butlaan Siciid Deni sida xun u galay xilka qaadistiisana ay ku daadatey dhiig ayaa soo kaxaystey ciidamo taabacsan dibna ugu soo noqdey Xiigalool. Gudoomiye C/xakiin Dhooba daareed aya la filayaa inuu la tashi la sameeyo beesha Warsangeli oo si xun loogu yasay labada maamul ee hareeraha.
Warar dheeraad ah oo kasoo baxaya Safarka Xildhibaan Dhoobo-daareed ayaa sheegay inuu booqashooyin ku tegayo degmooyin kale oo ka tirsan gobolka Sanaag. Beesha Warsangeli ayaa degta labada gobol ee Sanaag iyo Bari.
Si kastaba Safarkan Gudoomiye Dhoobo Wuxuu ku muujinayaa inuu yahay Hogaamiye Haysta Dad iyo Deegaan, Wuxuuna dhowaan xusay in hadii la Xaq dhowri waayo Heshiiskii Butlaan lagu dhistay in lagu kala tagi doono.